Welthungerhilfe: Welthungerhilfe Geeska Afrika – Habkayaga``
Tag Tusmada boga
Shaqada aanu qabano
Gali erayga raadinta
Wax ku saabsan Welthungerhilfe
Welthungerhilfe iyo Geeska Afrika
Gaajadu waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu weyn caalamka.Laakiin taa waxa lagu xalin karaa.Welthungerhilfe envisionsaduun uu qof kasta ku noolaan karo isku filaan cadaalad iyo waliba gaajo iyo saboolnimo la’aan.
Welthungerhilfe’s strategic goalis ‘hammigedu waa meel waliba oo gaajo la’aan ah ilaa sannadka 2030, taasi oo ku salaysan2nd UN Sustainable Development Goal. Taasi oo lala shaqeynayo shirkadaha dalka dhexdiisawaxaynu rabnaa inaan joojino gaajada ilaa abid meel kasta oo ay jimciyaddenu active ka tahay oo aan dhaalaanka waqkhtigan jooga iyo kuwa mustaqbalkaba inaan nolol fiican usii hagaajino iyaga iyo bulshadaba.
Siyaabaha loo joojin karogaajada
Waxaynu la dagaalameynaa gaajada aduunka oo dhan ka jirta si aan u adkeyno helitaanka cuntada.Taasi oo ah insite-specific agriculture,access to clean water, iyo waliba aan waxba yeeleyn bey’ada iyado hormarinaya caafimaadka, iyo dhaqaalaha bulshadaeconomic development.
Helitaanka cuntada nafaqada leh
Waxaynu tababarnaa reer miyiga sida ay u heli karaan cunto iyo nafaqo fiican ba waxaynu sidoo kale ku darnaa dumarka si ay uhormarto bulshada meeshaasi annagoo isticmaaleyna barnaamijka tobobarka ee LANN+ training.
Berro qodida meel xaddidan
Waxaynu caawinaa berr qodatada beeraha yar leh in ay beeraan dalag nafaqo badan tii oo lala dagaalamayo gaajada iyo saboolnimada oo la dhawrayo hantida dabiiciga ah.
Hummiga suuq ahaan
Welthungerhilfe waxay sidoo kale karti abuur ku samaysaa bulshada in ay lacag helaan iyagoo iibinaya dalagii ay beerteensidoo kale waxaanu amni galinay in cunto helaan reer miyigu oo xaqoodaasi uu ka taaban iibsiga dalaga ee caalamiga ah.
Welthungerhilfe mashruucyadeedu wax aka mid ah in ay caawiyaan bulshooyinka saameeyeen abaarta iyo dagaalkagargaarkeena dagdaga ah ee wakhtiga gaabani wuxuu sidoo kale ku xidhanyahay ka wakhtiga dheer leh si loo diyaariyo bulshooyinka musiibooyinka dhici karamustaqbalak.
Xooginta bulshada madaniga ah
Qaabka u doodista ku saleysan xuquuqda aadanaha ee Welthungerhilfe wuxuu sii xoojiyaa bulshada rayidka ah ee daneynta heerka hoose ee ay ka ilaalinayaan dadka la xaqirayo (kuwa qaata thanaid) iyo siinta qalabka si firfircoon uga dalbadaan xuquuqdooda aadamiga ee cuntada iyo helitaanka helitaanka dhul, biyo iyo abuur.
U doodista siyaasadeed
Waxaan sidoo kale taageernaa ururada aan dowliga aheyn ee ka shaqeynaya sidii loo beddeli lahaa xaaladaha siyaasadeed anagoo ku dhiirigelinayna wada hadal ku saabsan sinnaan u dhexeeya kooxaha bulshada rayidka ah, go’aamada siyaasadeed iyo maalgashadayaasha.
U halgamaya madax-bannaanida
Ujeedadayadu waa in nolosha dadka wanaajiso muddo dheer.Sidaa darteed, waxaan u shaqeynaa si waafaqsan mabda'a 'caawinta is-caawinta'.Barnaamijyadeenna waxaa loogu talagalay inay dadka u suurtogeliyaan inay la wareegaan noloshooda oo ay awood ugu yeeshaan inay hantaan xuquuqdooda bini-aadamnimo ee cuntada.
Qaabka Welthungerhilfe wuxuu ku tiirsan yahay oo keliya howlaha gaarka ah ee mashruuca iyo shaqada u doodista siyaasadeed, laakiin sidoo kale natiijooyinka la qiyaasi karo iyo la-xisaabtanka lamaanayaasha, deeq-bixiyeyaasha iyo dadka ku nool aagagga mashruuca.
Dhamaadka gaajada waa la gaari karaa markii ugu horeysay taariikhda. Sida kuwa badan oo ka mid ah kuwa ku lugta leh iskaashiga horumarka, waxaan rajeyneynaa in maalin uun shaqadeennu hadda kadib aan loo baahan doonin. Naga caawi inaan gaarno himiladaan oo aan uga qeyb galno dagaalka loogu jiro adduun gaajo la'aan.
La wadaag boga facebook-ka
La wadaag boga Twitter-ka
La wadaag boga linkedlin
La wadaag barta WhatsApp-ka
La wadaag barta lagu wada xidhiidho ee facebook messenger-ka
Welthungerhilfe Horn of Africa
Waax-magaaleedka Boole, Dagmada 03, Lambarka Guriga B1915 – Dhinaca dambe ee Boole Madhaaniyaalem Tel. Laanta – Sanduuqa Boosta 1866 – Addis Ababa, Itoobiya
Lambarka Tel.: +251- 662 47 65/66
Fakis: +251 662 47 31
Goobta Masalaha, dhinaca dambe ee Hoteel Ambassador, Hargaysa Somaliland
Lambarka Tel.: +252 634542592